Ilhaan Cumar: Ma ahan wax la fiirsan karo xaaladda gurracan ee Yemen ee ay wadaan Sucuudiga iyo Imaaraatka - BBC News Somali
Ilhaan Cumar: Ma ahan wax la fiirsan karo xaaladda gurracan ee Yemen ee ay wadaan Sucuudiga iyo Imaaraatka
Image caption Xildhibaan Ilhaan Cumar
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka mid ah xildhibaannada Aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa sheegtay in xaaladda guracan ee ay ku nool yihiin dadka Yemen ay ka dhalatay faragelinta ba'an ee ay dalkaasi ku hayaan Sucuudiga iyo Imaaraatka, qasabna ay tahay in la joojiyo.
"Waxa ka socda Yemen ee ay Sucuudi Carabiya iyo Imaaraatka horseedka u yihiin wax la fiirsan karo ma ahan. Wax aad u xaq daran waaye,"
Waxa ay sheegtay inay madaxweynaha Mareykanka ka codsadeen inuu joojiyo xiriirka dhaw ee uu labadaas dal la leeyahay amaba uu dib eego: "sababtoo ah waxyaabaha aan aaminsannahay iyo sida ay ku socoto Sucuudi Carabiya waa wax iska hor imaanaayo."
Ilhaan Cumar waxa ay sababaysay sababta ay ugu danqatay dadka Yemen ee ay dhibaatooyinka la dageen iyadoo sheegtay inay tahay in bini'aadamnimada la tixgaliyo: "marmarka qaarkood inaan xasuusanno waaye inaan bini'aadam nahay. Haddaan xitaa Muslimnimadii ka soo tagno, bini'aadminimadeenna inaan xasuusanno waaye. In qof miskiin ah oo lagu xaqdaroonaayo inaad u danqatid waaye."
Warbahinta Israa'iil oo weerar ku qaadday Ilhaan Cumar
Ilhaan waxa ay sheegtay in Koongareeska Mareykanka uu meel mariyay qaraar ku aaddan dagaalka Yemen taas oo ay doonayaan inay ku joojiyaan dhibka ka soconaya dalka Yemen.
Hasayeeshee qaraarkaas waxaa gaashaanka u daruuray madaxweyne Donald Trump kaas oo qaraarkaasi codka diimada qayaxan ku hor istaagay.
Xiriirka aadka u dhaw ee uu madaxwayne Trump la leeyahay boqortooyada Sacuudiga ayaa waxaa walaac ka muujiyay qaar ka mid ah xubnaha Koongreska Mareykanka.
Haatanna Ilhaan Cumar waxa ay sheegtay inay ku tala jiraan in ay meesha ka saaraan codkaas qaxayan ee uu adeegsaday Madaxweyne Trump.
Image caption Madaxweyney Donald Trump
Ilhaan waxa ay sheegtay in aanan loo dulqaadan karin in lagu dhaqmo laba wajiilanimo: "Waddankeenna Mareykanka haddii uu ka shaqeynaayo oo uu aaminsan yahay xuquuqda aadanaha, haddii uu yahay waddan aaminsan in dad masaakiin ah inay ku dhimayaan dalka Yemen oo aan taakulo u dirno dagaalka lagu wadana qeyb kuma lahaan karno."
Waxa ay intaasi ku dartay in taasi aanay ahayn go'aan ay Ilhaan kaligeed gaartay ee uu yahay mid ay isku raacsan yihiin inta badan xildhibaannada Aqalka Koongareeska Mareykanka.
'Dagaal xa-darra ah'
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in Sucuudiga iyo Imaaraatka Carabta ay dagaal xaq darra ah ka wadaan waddanka Yemen halkaas oo ay sheegtay in inta badan dadkaasi ay soo wajaheen macaluul ay hormuud ka yihiin labadaasi dal.
"Haddii aad fiirisid dagaalka xaqdarrada ah ee ay ku wadaan dalka Yemen qof Muslim ah oo dhihi karo maanta Imaaraatka iyo Sucuudi Carabiya yaan wax laga sheegin ilama ahan inuu jiro,"
"Sababta kaliya ee ay dadkaasi macaluusha u wajahayaan ayaa ah in labadaas dal ay go'aan ku gaareen in cariiri ay galiyaan nolosha dadkaasi. Marka haddii intaas aadan arki karin haddaba ma tihid qof xaq u shaqeynaya."
Waxa ay sheegtay inuusan jirin qof Muslim oo fiirsan kara waxa ay labadaasi dal wadaan.
Sacuudiga 'ma dal arxan daran baa'?
Diyaarad nooca aan duuliyaha wadin oo qarxisay saldhig ay leeyihiin militariga Yemen
Dagaalka Ilhaan iyo Sucuudiga iyo Imaaraatka
Hadalka Ilhaan Cumar ayaa imanaya xilli bilihii la soo dhaafay ay qaar ka mid ah warbaahinta Dowladaha Khaliijka la sheegay inay loollan adag kula jiraan haweenka muslimiinta ah ee ku biiray aqalka Koongareeska Mareykanka, kuwaas oo ay ka mid tahay Ilhaan Cumar.
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in ay u taagan tahay sidii cadaalad meel walba loo gaarsiin lahaa sidaas daraadeedna ay iska hor yimaadeen dalalka Sucuudi Carabiya iyo Imaaraatka "Labadaas waddan intay iska hilmaameen cadaalad ka shaqeynteeda ayaa waxa ay bilaabeen inay cadaaladdii ku xadgudbaan." ayey tiri Ilhaan Cumar.